Ny toeram-pitrandrahana mpanjaka Solomon (ampahany 15) - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2015-02 mpandimby ny Magazine > Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 15)
Ohabolana 18,10 Hoy izy: “Ny anaran’i Jehovah dia trano mimanda mafy; ny marina mihazakazaka ho any ka voaaro. Inona ny dikan'izany? Ahoana no hahatonga ny anaran’Andriamanitra ho lapa mafy? Nahoana i Solomona no tsy nanoratra fa Andriamanitra mihitsy no trano mimanda mafy? Ahoana no ahafahantsika mihazakazaka mankany amin’ny anaran’Andriamanitra sy mahita fiarovana miaraka aminy?
Ny anarana dia manan-danja amin'ny fiaraha-monina rehetra. Ny anarana iray dia milaza zavatra betsaka momba ny olona iray: ny lahy sy ny vavy, ny fiaviany ara-poko ary angamba koa ny toerana politikan'ny ray aman-dreny na ny sampiny pop tamin'ny fotoana nahaterahan'ny zanany. Ny olona sasany dia manana anaram-bosotra izay milaza zavatra momba an'io olona io ihany koa - izany hoe iza ary iza io olona io. Ho an'ireo olona nonina tany Atsinanana taloha, ny anaran'ny olona dia nanana dikany lehibe indrindra; dia toy izany koa ny Jiosy. Ny ray aman-dreny dia nieritreritra be momba ny anaran'ny zanany ary nivavaka momba izany amin'ny fanantenana ny fahatanterahan'ny zanany izay lazain'ny anarany. Fantatsika fa hanova ny anaran'olona izy indraindray rehefa manana zavatra niainany izy. Ny anarana hebreo matetika dia famaritana fohy momba ilay olona, ​​izay manondro hoe iza izany olona izany. Ohatra, ny anarana Abrama dia tonga Abrahama (rain'ny olona maro) mba hahafahany milaza fa izy dia rain'ny maro ary miasa amin'ny alalany Andriamanitra.
Endrika iray amin'ny toetran'Andriamanitra
Mampiasa ny anarana hebreo koa Andriamanitra mba hilazana ny tenany. Ny anarany tsirairay dia famaritana ny lafiny sasany amin'ny toetrany sy ny maha-izy azy. Izy ireo dia mamaritra hoe iza izy, ny zavatra nataony ary miaraka amin'izay koa dia fampanantenana ho antsika. Ohatra, ny iray amin’ireo anaran’Andriamanitra Jehovah Shalom dia midika hoe “Ny Tompo dia fiadanana” (Richter [space]]6,24). Izy no Andriamanitra mitondra fiadanana ho antsika. Manana tahotra ve ianao? Tsy milamina ve ianao sa ketraka? Dia afaka miaina fiadanana ianao, satria Andriamanitra mihitsy no fiadanana. Raha mitoetra ao anatinao ny Andrian’ny fiadanana (Isaia 9,6; Efesianina 2,14), ho avy hanampy anao izy. Manova olona izy io, manamaivana ny fihenjanana, manova toe-javatra sarotra ary mampitony ny fihetseham-ponao sy ny eritreritrao.
In 1. Mosesy 22,14 Andriamanitra dia miantso ny tenany hoe Jehovah Jireh "Jehovah mahita". Afaka manatona an’Andriamanitra ianao ary miantehitra aminy. Amin’ny lafiny maro dia tian’Andriamanitra ho fantatrao fa fantany ny zavatra ilainao ary tiany ny hanome azy ireo. Ny hany tsy maintsy ataonao dia ny manontany azy. Hiverina any amin'ny Ohabolana 18,10: Ambaran’i Solomona ao fa izay rehetra ambara momba an’Andriamanitra amin’ny anarany – ny fiadanany, ny fahatokiany mandrakizay, ny fahasoavany, ny fitiavany – dia toy ny rova ​​mafy ho antsika. Naorina an'arivony taona maro ny lapa mba hiarovana ny mponina amin'ny fahavalony. Ny rindrina dia avo dia avo ary saika tsy azo resena. Rehefa niditra tao an-tanàna ireo mpanafika, dia nandositra niala ny tanànany sy ny sahany nankany amin’ny lapa ny olona, ​​satria fantany fa voaro sy voaro izy ireo tao. Nanoratra i Solomona fa ny olo-marina dia mihazakazaka mankany amin’Andriamanitra. Tsy nandeha an-tongotra teo ianao, fa tsy lany andro ary nihazakazaka nankany amin’Andriamanitra ary niaro Azy. Miaro dia midika hoe arovana sy voaro amin'ny fanafihana.
Na izany aza, azo atao ny miady hevitra fa ny olona "marina" ihany no mihatra amin'izany. Avy eo dia misy eritreritra toy ny hoe “Tsy ampy tsara aho. Tsy masina toy izany aho. Be dia be ny fahadisoana nataoko. Ny eritreritro dia maloto ... "Ary misy anarana hafa ho an'Andriamanitra dia Jehovah Tsidekenu" Jehovah ny fahamarinantsika "(Jeremia 3).3,16). Omen’Andriamanitra antsika ny fahamarinany amin’ny alalan’i Jesosy Kristy, izay maty noho ny fahotantsika, “mba ao aminy no ho tonga fahamarinana eo anatrehan’Andriamanitra” (...2. Korintiana 5,21). Koa tsy voatery hiezaka ho marina amin’ny tenantsika manokana àry isika, satria hamarinina amin’ny soron’i Jesosy isika, raha mitaky izany ho an’ny tenantsika. Noho izany, amin’ny fotoana tsy azo antoka sy mampatahotra, dia afaka mandroso amin-kery sy amim-pahasahiana ianao, na dia amin’izay fotoana izay aza, indrindra rehefa tsy mahatsiaro tena ho marina ianao.
Manao fahadisoana mahatsiravina isika rehefa mandeha any amin'ny toerana tsy mety mba hitady fiarovana. Mampitandrina antsika toy izao ny andinin-teny manaraka ao amin’ny Ohabolana: “Ny fananan’ny manan-karena dia tahaka ny tanàna mafy aminy, ary toa manda avo izy”. Izany dia mihatra tsy amin'ny vola ihany, fa amin'ny zavatra rehetra izay toa manampy antsika hampihena ny ahiahintsika, ny tahotra sy ny adin-tsaina isan'andro: toaka, zava-mahadomelina, asa, olona iray. Nasehon'i Solomona - ary avy amin'ny zavatra niainany manokana noho izany dia fantany tsara loatra - fa ireo zavatra rehetra ireo dia manome fiarovana sandoka fotsiny. Na inona na inona afa-tsy Andriamanitra izay antenaintsika ho voaro dia tsy ho afaka hanome antsika izay tena ilaintsika na oviana na oviana. Ray no anarany ary tsy manam-petra sy tsy misy fepetra ny fitiavany. Afaka manana fifandraisana manokana sy feno fitiavana aminy ianao. Rehefa mandalo fotoan-tsarotra ianao, dia miantsoa azy satria fantany fa hitari-dalana anao “noho ny anarany” izy ( Salamo 2 Kor.3,3). Angataho izy hanampy anao hahatakatra hoe iza izy.
Taona maro lasa izay, fony mbola kely ny zanako, nisy oram-be mahery isa-alina. Nisy tselatra teo akaikin'ny tranonay ka saika herinaratra izahay. Gaga ireo ankizy. Raha nitselitselatra tamy ny haizina ny tselatra sy ny varatra, dia niantso taminay izy ireo ary nihazakazaka nankany aminay haingana araka izay azony natao. Niara-nipetraka tamin'ny fianakavianay izahay nandritra ny alina ary niara-nitazona mafy ny zanakay izahay mivady. Natory haingana ry zareo, ary natoky fa hilamina ny zava-drehetra satria niara-natory taminy i Neny sy i Dada.
Na inona na inona mitranga dia afaka miala sasatra miaraka amin'Andriamanitra ianao ary matoky fa miaraka aminao Izy ary mihazona anao eo an-tsandriny. Andriamanitra dia miantso ny tenany hoe Jehovah Sama (Ezekiela 48,35) ary midika izany hoe “Indro ny Tompo”. Tsy misy toerana tsy miaraka aminao Andriamanitra. Izy dia teo amin'ny lasanao, izy amin'ny ankehitriny anao, ary izy koa dia ho eo amin'ny ho avinao. Miaraka aminao Izy na amin’ny andro tsara na amin’ny ratsy. Eo anilanao mandrakariva Izy. Mihazakazaha ho azy noho ny anarany.